आफ्नै लिङ्ग काटेर दुई टुक्रा - Saptakoshionline
आफ्नै लिङ्ग काटेर दुई टुक्रा
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ १४, २०७६ समय: ७:०२:३९
मोरङको लेटाङ नगरपालिका–३ मिलन चोकका २२ वर्षीय सुनिल राईले आफ्नै लिङ्ग काटेर दुई टुक्रा बनाएका छन् ।
परिवारका अनुसार कहिले काहीँ असामान्य व्यवहार देखाउँदै आएका राईले बिहीबार तरकारी काट्ने चक्कुले आफ्नै लिङ्ग काटेका हुन् ।
लिङ्ग काटेपछि अस्पताल पुर्याइएका राईलाई हाल वीपी कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानमको नर्मल वार्डमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी विश्व अधिकारीले बताए ।
ओठलाई महिला सौन्दर्यको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ । गुलाबी ओठ महिलाहरुका लागि झनै आकर्षक मानिन्छ । जसका कारण पनि अधिकांश म...
एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । तर कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दब...
आफ्नै पत्नीलाई काँधमा बोकेर दौडिनुपर्ने प्रतियोगिता पनि दुनियाँमा कहीँ होला ? तर हुँदो रहेछ । अझ यस्तो प्रतियोगितामा पहि...
अहिलेका बालबालिका किन पुलपुलिएका छन् ?
अहिलेका बालबालिकालाई ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गर्नै हुँदैन । तिमी, तपाईं, हजुर भनेर मान मनितो गर्नुपर्छ । आमाबुवाले कडा शब्द बो...